Sintomy ny openSUSE 12.3 + Ahoana ny fandaminana azy? | Avy amin'ny Linux
Sintomy ny openSUSE 12.3 + Ahoana ny fandaminana azy?
petercheco | | Fitsinjarana
Salama namana avy amin'ny DesdeLinux. Tamin'ny fomba ofisialy dia Navoaka ny fizarana openSUSE 12.3 :). Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fanovana ity fizarana linux tsy misy kilema ity.. Ataovy.
1 Avy aiza aho no misintona azy?
2 Ahoana ny fandaminana azy?
Avy aiza aho no misintona azy?
Ahoana ny fandaminana azy?
Ry namako Linux, aorian'ny fametrahana ny OpenSUSE dia manoro hevitra anao aho:
Ampandehano ny SUDO
Fampianarana maro amin'ny Internet no mampiseho baiko izay mila sudo hampiasaina. Raha te hampandeha azy dia tsy maintsy manoratra ao amin'ny console izy ireo:
Apetraho ny teny miafina root
Ary avy eo manoratra
Aiza no lazainy hoe mpampiasa (asongadino), apetraho ny anaranao. Mitandrema tsara amin'ny teny nalaina, hamafa azy ireo ary soraty ny tenanao, satria raha tsy izany dia tsy handeha izany.
Manampia Repositories fanampiny:
Noho izany dia manokatra ny YaST ao amin'ny menio fampiharana izahay ary mankany amin'ny lozisialy> Repositories an'ny lozisialy ary mifidy «Add», ao amin'ny varavarankely izay hiseho manaraka, dia misafidy «Community Repositories»
Tsy mahafantatra anao ny wifi, inona no hatao?:
El OpenSUSE matetika tsy manana olana amin'ny wifi. Fa raha sendra anao ny vahaolana dia mora be izany. Ampidiro ny console ary midira ho faka toy izao:
su (namely enter)
soraty ny teny miafinao (hit enter)
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware (tsindrio hiditra ary araho ny torolalana)
Manavao ny rafitra izahay ary mametraka ny ilaina indrindra toy ny flash, java sns ary manampy ny tsara indrindra amin'ireo tahiry ao amin'ny Openuse Pacman miaraka amin'ny:
Raha hametraka ny sary ao amin'ny OpenSUSE 12.3 ny zavatra tokana ataonao dia ny mankany (Miaraka amin'ny tsindry tsotra kely amin'ny kinanao dia apetraka ho azy izy ireo):
Ho an'i Radeon HD5xxx sy karatra manaraka:
Ho an'ny Radeon HD2xxx amin'ny alàlan'ny karatra HD4xxx:
Ny Intel dia ampidirina tsy misy fangarony.
Codecs (miaraka amina tsindry tsindrio tsotra sy fametrahana):
ho an'ny GNOME, XFCE ary LXDE: http://opensuse-community.org/codecs-gnome.ymp
ho an'ny KDE: http://opensuse-community.org/codecs-kde.ymp
Fampiharana izay tsy azonao adino (Azonao atao ny mampiasa YaST amin'ny maody sary avy amin'ny Menu Applications, «Install / Delete software»
gimp, k3b, vlc, rar, unace p7zip-full p7zip-rar, opera, chromium, devede, transmageddon, brazier.
Aorian'izany rehetra izany dia mila manavao miaraka amin'ity baiko ity ianao amin'ny terminal:
Ary vonona… Ankafizo ity distro ity ary aza adino ny maneho hevitra
Avelako ho anao ny horonantsary momba ny openSUSE 12.3 vaovao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Sintomy ny openSUSE 12.3 + Ahoana ny fandaminana azy?
87 hevitra, avelao ny anao
Torolàlana tena tsara. Raha ny hevitro sy ny zavatra niainako dia ity, miaraka amin'ny Chakra, no distro tsara indrindra any amin'ny ambaratonga 64-bit. Haingam-pandeha sy mafy orina ary matanjaka izy io.
FIXOCONN dia hoy izy:
x64 Mint dia miasa izay bala.
Valiny amin'i FIXOCONN
Misaotra ny hevitrao :). Tena openSUSE no iray amin'ireo tsara indrindra 😀
Tsisy fisaorana. Ho an'ny tsiriko, amin'ny andro ananan'ny Chakra fitaovana toa an'i Yast, dia izy no distro tonga lafatra. Amin'ny karazany, Yast no zavatra mahavariana indrindra amin'ny Linux.
Tena tsara Yast, fa tongava amin'ny lehilahy izay tsy ny tena mahagaga ihany xD
Aleoko distre multiarch. Deb….?
Torolàlana tena tsara fa mila hazavaina ireto manaraka ireto:
Ahoana no ahafahantsika mamaha fa tsy mifandray amin'ny Internet ny PC?
Milaza izy fa tsy afaka mifandray amin'ny mpizara, noho izany manavao ny rafitra.
GRUB dia tsy manaiky ny rafitra fiasa hafa. Ny olana Grub dia nisy foana tao SUSE.
Nandeha tsara ny 12..2. Fa maninona no mieritreritra ny hivadika amin'ity vaovao ity aho?
Ampidiro ny YAST ary apetraho ny NetworkManager ho mpitantana tambajotram-pifandraisana amin'ny karatry ny tamba-jotra. Amin'izany no hamahanao ny olan'ny tamba-jotra satria ny NetworkManager tsy mitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny default.
Raha vantany vao mifandray amin'ny Internet ianao miaraka amin'ny fanavaozana ny zypper voalohany, dia hahitsiny ny olana Grub ary hametraka fanavaozana.
Iray ihany ny antsipiriany.
Ho an'ny karatra Radeon HD2xxx mankany HD4xxx, tsy mandeha ny mpamily tompony, satria manohana hatramin'ny Xorg 1.12 izy io, ary distros dia nampiasa ny kinova 1.13 nandritra ny volana maro.
Azo antoka fa hamaha ny olana amin'ny mpamily lova izy ireo miaraka amin'ny patch toy ny efa nataony tamin'ny Kernel 3.7. Heveriko fa mbola ho fotoana io .. Ankehitriny, ireo mpamily maimaim-poana amin'ireo karatra ireo dia tsy mandeha ratsy mihitsy ankehitriny
Zavatra iray ny manohana ny kernel ary zavatra iray hafa ny manohana xorg, ny zavatra tokana afaka manamboatra patch ho an'ny xorg dia amd. Ka tena mamporisika anao aho mba tsy hividy amd, raha hampiasa Linux. Nvidia farafaharatsiny mamoaka mpamily lova vaovao miaraka amin'ny fanohanan'ny kernel vaovao sy xorgs, fa tsy amd.
Hatramin'ny omaly, ny OpenSUSE 12.2 dia niasa tsara tamin'ny PC-ko. Manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso dia mametraka distro vaovao 12.3 aho ary tsy hoe tsy mahafantatra ahy fotsiny ny GRUB, fa tsy mamela ahy hifandray amin'ny Internet.
Vahaolana: Ao amin'ilay habaka kapila misy an'i Suse ihany no niteraka olana tamiko dia nametraka ny Netrunner 12.12 fotsiny aho. Mahafantatra ahy ny GRUB ary afaka mifandray tanteraka amin'ny Internet aho, avy eo am-panovana ahy izao. Netrunner dia kde izay tsy hoteneniko hoe tsara noho SUSE, fa tsy ratsy koa. Mety tsy maharaka toa an'i SUSE ilay izy, fa tsy hiteraka olana amiko koa. Voavaha ny olana. Etsy an-danin'izany, tsy nametraka mpamily akory aho. Niditra tamin'ny OpenSUSE DVD fotsiny aho ary rehefa vitako ny fametrahana GRUB dia tsy nahafantatra ahy ary tsy afaka nifandray tamin'ny Internet aho.
Tsara «Inona no hatao aorian'ny fametrahana 12.3» tuto 🙂
iray amin'ireo distro tsara indrindra fantatro fa tiako izy fa liana tamin'ny Linux aho ... na izany aza, mijanona ao amin'ny ArchLinux aho lol
Mahafinaritra ilay horonantsary \_ o /, tsy nahalala fika KDE maromaro asehon'ilay video aho ..
Ñandekuera dia hoy izy:
Mendrika havaozina ve izy io? Manana 12.2 aho miaraka amin'ny KDE 4.10 ary mandeha tsara….
Mamaly an'i Ñandekuera
Manavao izao fotoana izao aho ary manana ny endriny mitovy .. raha velona aho dia holazaiko aminao rahampitso .. 🙂
Tiako foana ny mametraka avy eo am-boalohany mba hisorohana ireo horonana ratsy 🙂
Tamin'ny tapaky ny taona 2013 ary nametraka tanteraka ny rafitra fiasa isaky ny kinova vaovao? Feo talohan'ny tantara 😛
Fantatro fa ny zypper dup iray ihany dia ampy, fa indraindray dia tsara kokoa ny manao fametrahana madio toy izay manitsy ireo olana mety hitranga mandritra ny fanavaozana na miaraka amina programa hafa .. Miankina amin'izay ampiasaina manokana izany .. 🙂
Misintona dieny izao hisolo an'i Fedora. Ankehitriny dia ho Arch + Gecko aho.
Faly mahita an'io .. Fanontaniana iray: Maninona no soloinao ny Fedora?
Mbola manana ny olana maharitra amin'ny tranomboky vaky ve ny OpenSuse? mahafaly
Izaho dia mpampiasa OpenSUSE nanomboka tamin'ny 11.0 ary tsy mbola nanana olana tamin'ny tranomboky.
Tsy nanana olana tamin'ny fivarotam-boky mihitsy aho. Ny tsy vitako mihazakazaka dia milina virtoaly. Fa manana an'io amin'ny solosaina finday aho ary tsy omeko baolina firy.
Mametraka ny repo Virtualbox ianao ary voavaha ny olana.
Avereno ny openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, 12.3:
Taorian'ny a: fanavaozana ny zypper
zypper mametraka Virtualbox-4.2
Eny, nanandrana 12.2 aho ary tsy nanintona ahy toy ny mint kde ary vao haingana aho dia nanandrana netrunner 12.12.1 distro izay nanomboka nitabataba nefa nahatsapa ho mavesatra noho ny mint. Amin'izao fotoana izao dia hanova mint kde aho mba ho toy ny netrunner. Salama.
Tsy haiko raha azoko fa ny vahaolana amin'ireo olana amin'ny Internet dia manome ahy ny fiheverana fa tsy mahomby.
Voalohany, izany dia script izay entin'ny openuse hifehezana ireo mpamily braodcom maimaim-poana. Manana solosaina finday miaraka amin'io fitaovana io aho ary miasa mafy ireo mpamily maimaimpoana ao amin'ny disko rehetra efa nanandramako, ary rehefa miasa izy ireo!
Tamin'ny 2011 Broadcom dia namoaka mpamily fananana sasany (broadcom-wl) izay mahazendana, ny zavatra ratsy dia manana izy ireo, saingy lazaiko aminao fa lavorary izy ireo ary tsara kokoa noho ny mpamily maimaimpoana maro avy amin'ny atheros sy mpamokatra hafa. Ny lafy ratsy dia ilainao aloha ny manana fifandraisana Internet satria afa-tsy ny distros fidirana sasany dia tsy misy mampiditra azy ao anaty kapila fametrahana. Ao amin'ny openuse 12.2 izy ireo dia ao amin'ny tahiry packman ary voaangona ho an'ny voan-javatra samihafa izay zarain'i openuse. Raha ny marina, ny famerenana ny packman dia efa natambatra ho an'ny 12.3 ary mihodina miaraka amin'ny kernel 3.8 izy ireo.
Avy eo, ny openuse 12.2 mihitsy no nanome ahy olana tamin'ireo mpamily atheros sasany, saika ny mpamily maimaimpoana rehetra dia tonga ao anaty fonosana kernel-firmware, ka eo no tsy maintsy hikasihanao raha resaka hardware hafa ankoatry ny broadcom.
Dia inona koa. Fomba mahaliana hanamboarana sudo. Mba hampitahorana ve? Ho an'izay mbola tsy nanandrana openuse. Opensuse dia mitondra fitaovana iray tena antsoina hoe YaST izay ivon-toerana fanaraha-maso goavambe, lehibe kokoa noho ilay eo am-baravarankely ary mamela anao hanao fahagagana. Na i Ubuntu na i Mint aza tsy mitondra zavatra toa izany, ny drakes (Mandriva sy Mageia) + PClinuxOS ihany no mitondra zavatra mitovy amin'izany
Io no distro mahazatra azonao atao raha tsy misy ny terminal ary tiako izany satria manome azy io ho an'ny rehetra. Manana Opensuse amin'ny solosaina rehetra ao amin'ny fianakaviako aho satria raha ny marina, sarotra ny manapaka azy ary tsy misy very ao.
Ny Version 12.2 dia tena mandeha tokoa ka manavao aho. Heveriko fa ny manaraka dia ho 13.1 na zavatra toa izany, tsara hifankahita isika ary raha tsy izany dia horaisiko miaraka amin'ny fanohanana maharitra mandrakizay (ho an'ireo izay milaza fa 18 volana monja io).
Ahh, ireo izay manana ny repos maimaim-poana, tamin'ity herinandro ity dia niakatra tamin'ny kinova faha-4 izy ireo raha toa ka liana ianao ary azo antoka tsara izany, fiantohana amin'ny alàlan'ny varavarana misokatra ((mpamorona libreoffice tena miasa)
Tapitra ny fitantarana. Raha azonao atao dia tokony ahitsinao ilay zavatra Broadcom, sao misy manao zavatra tsy lalaovin'izy ireo nefa tsy fantany.
Misaotra mialoha anao amin'ny hevitrao, izay tsy isalasalana fa ankasitrahana (noho izany izahay eto) :).
Mikasika ireo mpamily wifi amin'ny broadcom dia fampahalalana ofisialy fotsiny no atolotray avy amin'ny pejy openSUSE ary tamin'ity fomba ity dia tsy mbola nanana olana tamin'ny Wifi Broadcom bcm43xx aho. Ny loharanom-baovao ahazoako ny fampahalalana dia:
Mikasika ny sudo sy Yast .. napetrako toy izao ny fikirakira sudo, satria ity fomba ity dia haingo haingana be nefa tsy mila manindry ny totozy intsony eto - any foana :). Mikasika ny Yast, miombon-kevitra aminao aho, io no iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra azon'ny openSUSE. Mahagaga fotsiny izany.
Miarahaba mpiara-miasa 🙂
Fantatro io torolàlana io satria efa nolazaiko taminao, volana vitsivitsy lasa izay dia nitodika aho nandritra ny andro sy tapany nitady vahaolana amin'ny olan'ny atheros ary raha ny marina dia tsy tena tsara ny fomba nanehoan'izy ireo izany. Tamin'izany fotoana izany dia ho an'ny 12.2.
Ny zava-mitranga dia ny temperer installer dia miserana be ary indraindray dia miteraka fifandirana sy fikirakira diso raha nampifandray ny wifi nandritra ny fametrahana ianao. (Tsy mitranga foana izany fa imbetsaka aho no nitranga tamiko) Tsy dia izany loatra tamin'ny Fedora 18, na dia mahatsiravina aza ny installer, rehefa namerina nametraka ny mailaka aho dia namonjy tanteraka ny fikirakirana.
Raha ny hevitro dia manoro hevitra aho ny tsy handrindrana ny Wi-Fi mandritra ny fametrahana azy, hisy fotoana hanamboarana azy io avy eo. Inona izany, tsy ny olan'ny wifis rehetra akory no omen'ny broadcom ary izany no tiako ho lazaina. Broadcom no olana amin'ny 80% amin'ireo tranga ireo, fa amin'ny tranga hafa dia avy any andaniny ny olana.
Opensuse dia distro mahatalanjona, raha toa ka maharitra mandrakizay ny zypper indraindray nefa tena mandeha tsara. Avy eo, tafiditra amin'ny tetikasa maro toy ny libreoffice sy kde izay tadiavinao izy na tsia, naorin-dry zareo suse izy ireo.
Goavana ny repo, somary miparitaka, nefa afaka manamboatra sombin-distro tena biby ianao raha voalamina tsara ny laharam-pahamehana. Tsy hita ao amin'ny debian izany, ny fanaovana apt-pinning dia helo mikorontana, farafaharatsiny mba avelan'ny synaptic hitantana an'io sary io.
Na izany na tsy izany, arahabaona
Miombon-kevitra aminao aho amin'ny zavatra rehetra :). Ireo mpampiasa dia tsy tokony hanamboatra Wi-Fi mandritra ny fametrahana azy satria hanelingelina ny installer: D. Mametraka mivantana foana aho (tsy mihazakazaka maody mivantana aho ary mametraka ny rafitra avy eo). Ny Repos aza dia mihoatra an'i Debian sy Ubuntu.
Raha tsy misy fisalasalana, ny openSUSE no tsara indrindra misy ary tsy miaraka amin'ny KDE ihany :), tsara ihany koa izy amin'ny xfce, gnome .. tiako io.
Arahaba openSUSEro 😀
Ny OpenSuse dia toa ahy hatrany no haingana indrindra nametraka ireo fizarana malaza indrindra, afaka "manorotoro" tsinjara efa misy ny olona iray, izay tsara ho ahy izany tamin'ny nanombohako tao amin'ny GNU / Linux. Saingy nitazona ahy foana izy io rehefa niresaka momba ireo tranomboky vaky, ankehitriny manana ny Fedora 18 miaraka amin'ny Xfce 4.10 ary teo aloha dia nanao fizara ho an'ny OpenSuse aho, hizaha toetra ny tontolo iainana KDE izahay, mampidina ny fizarana. mahafaly
Rehefa avy nametraka sy namerina nanokatra ny OpenSuse aho dia nanana olana tamin'ny fifandraisana amin'ny Internet toy ny maro saingy namaha izany tamin'ny alàlan'ny fandehanana tany amin'ny Yast> Network Settings> Global Settings ary ao amin'ity kiheba ity no ahafahan'ny networkmanager. Mikasika ny grub dia azoko atao ny manombatombana fa raha hametraka azy io dia mila manendry fizarazaran'io ianao fa tsy "manorotoro" ny rafitra napetraka teo aloha. mahafaly
Salama Ferran: mety ho voafaritra tsara kokoa ve ianao amin'ny fanazavanao momba ny Open SUSE? Ie, teo am-piezahana marina teo aho ary tsy nahazo n'inona n'inona. Mikasika ny GRUB, dia liana ihany koa aho ny hamaky fanazavana momba ny fahaizanao nanamboatra azy io, satria tsy maintsy nametraka CD mivantana aho ary nahavita namerina ny GRUB, saingy tsy nisy na inona na inona momba ny fifandraisana Internet. Misaotra sy arahaba indrindra.
Famotsorana OpenSuse 12.3. mahafaly
Raha te hanatsara amin'ny Internet ho mora amin'ny openSUSE 12.3, azonao atao ny mijery an'ity lahatsoratra ity:
@chaparral. Voalohany indrindra dia milaza fa tsy manam-pahaizana amin'ny linux aho ary mpampiasa mahazatra aho. Alohan'ny hametrahana ny OpenSuse dia efa nametraka ny Fedora 18 niaraka tamin'ny Xfce 4.10 aho, tao anaty kapila mafy 715 gig ary nanokana 400 gig ho an'i Fedora aho; Ka namela ampahany iray maimaimpoana aho ho an'ny famolavolana 300 gigs ary somary hohafanaina ao aoriana. Ny torohevitra omeko anao mba hanananao grub hatramin'ny voalohany dia ny fametrahana ny OpenSuse fa tsy eo an-tampon'ny rafitra fiasa hafa, tokony efa nanendry ny fizarazarany ianao rehefa mametraka, amin'ity fomba ity ihany no hahafantaran'ny grub anao. Mametraka koa amin'ny kinova DVD (ny kinova feno). Araka ny voalaza etsy ambony OpenSuse ho an'ny "maloto" ary amin'ny Kde dia tsy mifidy networkamanager, ity dingana tokony hataonao ity, araho fotsiny ity zotra ity. YAST >> Fikirakira tamba-jotra >> Safidy manerantany >> ary safidio eto >> Mpampiasa voafehy amin'ny NetworkManager. Manantena aho fa raha tsy misy fiteny teknika dia hamaha ny olanao ianao. mahafaly
Tsy hitako izay safidin'ny Network Settings, heh, heh. ary namely an'i Yast aho fa tsy fantatro ny fihodinana. Ny fananana Yast dia misy safidy sivy (nadika tamin'ny Espaniôla, ary angamba izany no tsy fahazoako anao) izany hoe:
4) Fitaovana tambajotra
5) Serivisy amin'ny tamba-jotra
6) Fiarovana sy mpampiasa
8) Fanatrehana ary
Nandalo an'ity doka ity aho ary tsy hitako izay nolazainao. Nametraka OpenSuse imbetsaka aho ary mbola tsy nahita an'io olana io. Amin'ny lahatsoratra manaraka (noho ny tsy nahavitako lava loatra) dia holazaiko aminao ny fomba nahavitako nametraka ny Suse 12.3.
@chaparral. Tsy misy olona teraka mahalala, ny mitranga dia ny GNU / Linux mametraka azy ireo amin'ny fiteny anglisy foana. Mandehana any amin'ny YAST >> Fitaovana amin'ny tambajotra (4) >> Preferansa Network >> Safidy manerantany >> ary eto no fidinao NetworkManager. mahafaly
Misaotra Ferran. Farany dia takatro izay nolazainao tamiko fa mijaly ity fanovana na làlana manaraka ity:
Yast> Fitaovana tambajotra> Fikirakira tamba-jotra> Safidy manerantany> Eto izahay dia manisy marika ny safidy «Fehezin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny NetworkManager». Manantena aho fa marina ny anao ary rehefa mipoitra ny olana dia afaka mamaha azy aho. Nahita didy vitsivitsy nampiasako aho ary tsy nety tamiko. Misaotra sy arahaba indrindra.
@chaparral. Azo antoka fa mianatra zava-baovao isan'andro isika, ankehitriny manana fitaovam-piadiana vaovao hiatrehana ny OpenSuse, araka ny efa noresahiko, tokony hamaha ny fifandraisana amin'ny Internet amin'ny tanana isika. mahafaly
OK Ferran. Heveriko fa tsy maintsy bug amin'ny fizarana izay ahitsy ao anatin'ny fotoana fohy. Izany no antony tsy nanolorana hevitra anao hametraka fizarana vao navoaka. Mety foana ny miandry andro vitsivitsy.
@chaparral. Raha efa nanapa-kevitra ny hiandry ny vahaolana mety halamina ianao, dia manoro hevitra anao aho mba hanao izany alohan'ny hametrahana. mahafaly
Eny Ferran .. Ary raha tsy maintsy misafidy amin'ny Fedora sy openSUSE ianao, iza no tianao?
Fiarahabana sy fiainana lava hisokatraSUSE 🙂
OK Ferran, fa raha nanoratra ny tenako araka ny nolazainao aho dia tsy nila nangataka ny fanampianao hamaha ny olana, izay, inona no azonao natao tamin'ny fahalalanao be dia be momba ny OpenSUSE? Tsy tokony ho voatery nanao izany ianao zarao. Heveriko fa tsara kokoa noho izany, sa tsy izany? Misaotra sy arahaba indrindra.
Manontany ahy izy ireo hoe iza amin'ireo fizarana roa no hofidiko, valiako fa efa namolavola ny PC aho, ary nametraka OpenSuse indray niaraka tamin'ny KDE aho, ary tsy nesoriko ny Fedora noho ny fametrahana azy, fa satria ny OpenSuse dia manolotra fampidirana tanteraka ao amin'ny biraony. Ary mpampiasa tsotra fotsiny aho, fa tsy maintsy mianatra "mitily" amin'ireo rafitra, izany no mahatonga ny fisintomana ireo fizarana, ka raha maka ny rafitra ianao dia afaka mamerina mametraka. mahafaly
Mazava fa tianao kokoa ny OpenSUSE noho ny Fedora. Heveriko ihany koa fa amin'ny resaka kde SUSE dia feno kokoa. Mety tsy hifanaraka amin'i Fedora izany. Na dia tsy ratsy mihintsy i Netruner, ary raha raisintsika an-tsaina fa mifototra amin'ny Ubuntu izany, izay tsy hoe tsy misy ny fahasoavany.
Heveriko fa ny PCliux dia manana ny vokadratsy amin'ny birao, safidy tsara raha te hanandrana ny KDE ianao, raha ny olana dia ny loharanon'ny PC. mahafaly
Oai027 dia hoy izy:
Vao avy nanavao ny Kubuntu 12.10 64 bit ho an'ny Open Suse aho. andao jerena izay mivoaka ...
Valiny amin'i Oai027
Tsy misy ratsy 🙂
Marina izany, marina ny anao !!!, 3 andro miaraka amin'ny OpenSuse 12.3. Dingana iray holazaina, fantatro ireo mpamily Nvidia Geforce nametraka tamin'ny tsindry 1, KDE 4.10.1 miaraka amin'ny mangarahara rehetra. miasa haingana, mahay. Nahaliana an'i Yast aho, feno tanteraka, mbola hitako ihany. Fampisehoana malama sy milamina….
Lahatsoratra tena tsara, ilaiko izany. Vao haingana aho no nametraka ny Fedora 18 niaraka tamin'ny win 7 (ilaiko amin'ny asa io) fa avy amin'ny kinova DVD dia tsy afaka nametraka azy io, avy amin'ny kinova mivantana ihany no vitako. Na dia tsy nanana olana tamin'ny fandidiana aza aho dia tsy dia faly tamin'ny rafitra fizarazaran'ilay mpampita sy ny grump startup. Hametraka Suse eo anelanelan'ny anio sy rahampitso aho hahitako izay fandehany, dia holazaiko anao ny toetrany = 0).
Salama! azafady fa tsy afaka namaly aho taloha toy ny fametrahana ny OpenSuse. Ny fametrahana dia tena tsotra ary tsy nanana olana tamin'ny fametrahana azy niaraka tamin'ny win7 tamin'ny fizarazarana samihafa aho. Ny hany zavatra sarotra dia ny tsy maintsy namerenako ny Grub mba hahafantarany ny fametrahana win7 saingy soa ihany fa tena tsotra ihany koa izy io, raha ny tena izy, ny configurations isan-karazany dia azo atao amin'ny birao iray ihany.
Ny zavatra tsy azoko dia ny antony tsy ahafahana manavao sy / na mametraka programa maromaro miaraka amin'izay.
Miasa tsara ny zavatra hafa rehetra ary tiako ny birao KDE miaraka aminy.
Salama .. Faly aho fa nandeha tsara ho anao ny zava-drehetra :).
Mikasika ny fametrahana fonosana .. Azonao atao ny mametraka fonosana maromaro tsy misy olana hatramin'ny voalohany nikarohanao sy nifidiananao ireo rindrambaiko rehetra mahaliana anao ary avy eo omenao hampihatra (raha misy ny foibe manampy / manala programa) na azonao atao mampiasa ny terminal amin'ny endrika zypper mametraka program1 program2 program3 sns.
Miarahaba an'i Carolina ary mankafy ny openSUSE anao: D
Misaotra betsaka amin'ny tolo-kevitra.
Fantatrao fa nanomboka fampianarana linux aho izay hiasa sy hianarantsika miaraka amin'i Debian. Rehefa nolazaiko tamin'ny mpampianatra fa mampiasa openuse 12.3 aho dia nasainy niova ho Fedora 15 satria mitovy amin'ny kinova voan-kernel no ampiasainy na farafaharatsiny ny kernel dia tsy ambony noho ny 3.x. Misy fahasamihafana be ve eo amin'ny kernel iray sy iray hafa hanovana ny distro sy ny kinova?.
Saingy, tsy misy fahasamihafana .. Ny kernel dia mivoatra (mitombo) amin'ny fifanarahana amin'ireo fitaovana vaovao manampy mpamily sy patsa miampy fanatsarana ny fahombiazana .. Tena tsy azoko ny hadalàn'ny mpampianatra anao any am-piasana .. Mijanona ao amin'ny openSUSE 12.3 anao ary Avelao ny mpampianatra hianatra alohan'ny hitenenany zavatra tsy misy dikany toy izany :-). Azonao atao ny miteny amin'ny mpampianatra amin'ny fiadanan-tsaina rehetra eto amin'izao tontolo izao fa ny Debian Squeeze dia hosoloin'i Debian Wheezy (ny kinova vaovao misy bibikely 5 hovahana ... izany hoe afaka iray na roa herinandro dia havoaka) ary efa tafiditra izy kernel 3.2 😀
petercheco, misaotra betsaka tamin'ny valinteninao, manampy be ry zareo = 0).
Niresaka tamin'ny mpampianatra indray aho ary nifanaraka izahay fa tsara kokoa ny mametraka ny Fedora 18 ary mihodina ny Debian 6 ho fanazarana ireo kilasy.
Tara ny namakiako ny hevitrao ka efa nesoriko ny OpenSuse ary napetrako ny Fedora 18, ka izao aho handeha ho any amin'ny paositra configora Fedora, heh!. Manantena aho fa hijanona miaraka amin'ity distro ity mandritra ny fotoana fohy satria hatramin'ny nividianako ilay kahie (1 volana mahery kely) dia heveriko fa nametraka sy nanandramana distro 8 teo ho eo aho, hehe.
jereo raha te-hametraka Fedora ianao, safidio ny kinova KDE an'ity .. Nifindra avy tany Gnome ho any KDE ny Fedora satria milamina kokoa noho ny kinova Gnome .. Mitovy ny fikirakirana, aza apetraka fotsiny ny fonosana Gnome ..
Avelako ho anao ny fanaingoana voatondro:
Manokatra ny terminal izahay ary miditra ho faka:
Ankehitriny satria apetraka default amin'ny toerana misy ny java dia hametraka flash isika:
Ankehitriny dia manampy an'ity tahiry ATRPMS ity izahay:
Ankehitriny dia hametraka mpamily laharam-pahamehana izahay mba hiantohana ny fitoniana ao amin'ny rafitrao. Ho an'ity tanjona ity dia misy ny fonosana laharam-pahamehana yum-plugin (apetrak'izy ireo avy ao amin'ny foibe manampy / manala programa).
fedora, fanavaozana an'i Fedora… laharam-pahamehana = 1
RPMFusion sy adobe… laharam-pahamehana = 2
Repo hafa toy ny atrpms… laharam-pahamehana = 10
Misokatra ho anao ny feso feso ary afaka mandeha amin'ity làlana ity ianao ary manova ny fanandramanao.
yum -y mametraka p7zip rar unrar vlc gimp qt-recordmydesktop filezilla libreoffice libreoffice-kde libreoffice-langpack-en
yum -y manala caligra *
Izahay dia vonona ny hampiasa ny rafitray.
Raha mila skype ianao dia azonao atao ny misintona azy amin'ity rohy ity:
Mba hananana boaty virtoaly amin'ny fomba mora dia ampidino ny repo ho an'ny Fedora ary adikao amin'ny folder: /etc/yum.repos.d/
Ity ny rohy hampidinana ny Fedora 18 KDE:
tena tsara aho manomboka fiarahabana sy fisaorana
Ny hany zavatra apetraka amin'ny teny anglisy, dia mila manavao azy ianao
Hugo Nogueira dia hoy izy:
Miarahaba anao namana Peter. Mpianatra iray anao no miteny aminao mba hiteny 🙂 Avelao aho hilaza aminao fa tiako kokoa ny kinova Gnome noho ny KDE, izay tsy ahafahako manao kisary tsotra raha tsy mikorontana eo amin'ny birao, saingy hoy aho, hevitro io. Mitaraina momba ny Gnome3 ny rehetra fa hatreto tsy mbola nanome ahy olana izany. Ny anontaniako dia raha mendrika ovaina ho 12.3 .. Ho hitanao ny fotoana voalohany nanandramako ny OpenSUSE niaraka tamin'ny 12.2 ary nanome olana be dia be tamiko izany, satria somary miadana ny manomboka ary indraindray tsy nanomboka noho ny lesoka tamin'ny mpamilin'ny karatra sary (heveriko). Nahazo kapila OpenSUSE 12.1 sy "tadan!": Hita fa manomboka amin'ny q5 segondra ary mikatona ao anatin'ny 6 segondra, ary tsy mbola naheno tamin'io karatra io intsony aho…. Izany no mahatonga ahy matahotra ny handeha amin'ny 12.3 🙁
Valiny ho an'i Hugo Nogueira
Ho fitsipiky ny ankihibe ho an'ireo mpampiasa tsy teknika na matihanina, raha tsy ilaina ny manavao azy dia AZA havaozina.
Mazava ho azy fa isaky ny kinova rindrambaiko vaovao, na ny kernel na ny singa hafa amin'ny rafitra na ny fampiharana fotsiny toy ny Internet browser, ny office suite na ny audio player, misy fampiasa vaovao misy ary koa ny olana raikitra _na dia_ misy koa ny olana vaovao nisedra olana taloha taloha.
Ny azonao atao dia ny manandrana 12.3 amin'ny sary mivantana (CD na pendrive) ary jereo ny fomba fiasany, raha toa ka mandeha tsara izy io dia mila manamboatra backup amin'ny fizarazaran-toerana izay nametrahanao ny rafitra miasa misy anao ary avy eo mametraka 12.3 mangina. Mazava ho azy fa raha manana toerana malalaka amin'ny kapila ianao dia afaka misafidy ny hametraka 12.3 amin'ny fizarazaran-tany vaovao koa.
jereo ny hevitro mihoatra ny latsaka mifanaraka amin'ny hevitra ilaozako anao msx, fa azoko lazaina amin'ny zavatra niainako manokana fa ny andiany 12.3 dia nametraka na dia tapa-bolana aza aho dia lasa rc ary tsy nahita olana aho, izay nitranga tao 12.1 sy 12.2, noho izany dia mamporisika anao aho hanandrana azy amin'ny livecd ary avy eo havaozina tsy misy tahotra. Ankehitriny, raha manana karatra sary ATI taloha ianao dia aza mametraka mpamily tompony satria ny andiany 12.3 dia tsy mifanaraka amin'ireo mpamily lova taloha ATI. .. Noho izany dia tazomy ireo mpamily maimaim-poana izay tena miasa tsara ankehitriny ary ny kernel vaovao 3.7.10 dia miasa tsara :). Ho hitanao ny tsy fitovizan'ny fahombiazany amin'ny ankapobeny na dia miaraka amina rafitra tsy misy ondrilahy tokana aza ary ho hitanao fa nametraka KDE aho: D.
VETO dia hoy izy:
Jojooooo! Voalazanao fa miasa daholo ny mpamily rehetra amin'ny Intel Wifi ... Eny, nanandrana Dell Inspiron 640m niaraka tamin'ny Intel Wifi aho ary miasa tsy misy olana (manasatra azy ny mifandray amin'ny tambajotra) ... Fa apetaho amin'ny Gateway 200-ARC koa miaraka Intel Wifi ary tsy misy mahita ny karatra tsy misy tariby, na izaho aza mampihetsika sy mamono ilay switch nefa tsy miova ... Notsapako ny baiko terminal ary nilaza tamiko izy fa tsy hita ilay baiko ... Inona koa no azoko atao hampandeha azy?
Valio i Veto
Ity no mpamily ho an'ny wifi intel anao ... somary niavaka ny maodely Intel PRO / Wireless:
Ny zava-mitranga ry namako dia tsy maintsy mametraka fonosana ilain'ny suse ianao izay tsy tonga tampoka ao kde hahafahana mampiasa an'io baiko napetrak'ilay namantsika io. Tokony hanandrana «sudo zypper amin'ny b43-fwcutter» ianao ary avy eo ny baikon'ny namantsika 🙂
Misaotra hoanareo roa ... efa tsapako ny fomba sarotra fa tsy eo ny firmware ho an'ny intel ... Nifandray tamin'ny tariby aho ary nanomboka nijery tao amin'ny trano fitehirizana aho ary hitako talohan'ny nahitako an'io fa nisy zavatra nitranga satria tsy azoko ilay maodeliko. mampifandray ... Mijanona ao amin'ny dinika «Fanapahan-dalàna Takina» ary ny kisary dia mijanona ao anaty lovia miaraka amin'ny lakile ... .. Ary zavatra hafahafa satria amin'ireo modem hafa raha azoko atao ...
Mety ho bikan'ilay gnome keyring izany, andramo ny mampifandray azy amin'ny yast mivantana fa tsy ny mpitantana ny tambajotra.
Oo ary avy eo zavatra hafa… Izay inoako fa lesoka fametrahana SUSE… Miaraka amin'i CHROME amin'ny fotoana voalohany hanokafako azy dia mandeha tsara izy io, fa raha manokatra azy indray aho nefa tsy manomboka indray dia mahazo ny làlan'ny baiko miaraka amin'ny latabatra adiresy Chromium Address … Rariny ve ny fieritreretako fa noho ny hadisoana fametrahana izany? Nitranga tamiko teo amin'ny Gateway ity izay zara raha vakian'ny mpamaky DVD, ary amin'ny Dell dia mandeha toy ny tsinontsinona ny zava-drehetra ...
Ny fepetra arahana dia:
-> Gateway 200ARC: Processor Pentium M (Centrino) 1.5Ghz 1Mb-L2 400Mhz-FSB, RAM Samsung 512Mb DDR266, Disk 40Gb IDE Samsung (tsy ny tena izy satria simba), combo Pioneer DVD / CDRW, Chipset Intel 82855, Sigmatel Audio STAC9752, Wireless Calexico 2 / Intel PROSet
-> Dell Inspiron E1405: Core2Duo 1.83Ghz 2Mb-L2 667MHz-FSB processeur, Kingston 3Gb DDR2-800 RAM, Fujitsu 60Gb SATA7200 kapila (kapila faharoa fanandramako), Philips Super-Multi DVD + RW, Intel GM945 Chipset, Sigmatel Audio STAC92XX, Wireless Intel 3945
Ratsy saina indray ... Misy ... Eny, zavatra esorina na hitazona an'i SUSE tsy hiadana?
Ary maninona no tsy mahazo ny sary famantarana SUSE ??? 🙁
ovao ny mpampiasa anao: https://blog.desdelinux.net/tips-como-cambiar-el-user-agent-de-firefox/
Ok ary amin'ny inona no miadana? Andao hojerentsika raha miseho izao ny sary famantarana SUSE… ..
Ho toy izao:
Miankina amin'ny rafitra fiasa ampiasainao ny solontenan'ny mpampiasa
en about:config misy motera fikarohana (ny bara ambony), karoka general.useragent.override, kitiho ny fanovana ary apetaho ilay kaody napetrako etsy ambony
Jos dia hoy izy:
Salama, torolàlana tena tsara izy io :), manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, manana olana aho. Rehefa tsindrio ny menio ho an'ny mpampiasa ary tsindrio indray ny toe-javatra (izany rehetra izany ao amin'ny openuse 12.3 miaraka amin'ny gnome 3.7) dia asehon'ilay kodiarana fa misy entana, mandritra ny segondra vitsy dia mijanona ho toy izao fa tsy mampiseho ny fikirana, ny ny efijery dia miloko diagonaly ary amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mampiasa peripheral aho ary tsy afaka mamono ny pc amin'ny bokotra herinaratra fotsiny aho, nanana olana nitovy tamin'i Fedora 18 aho ary afaka namaha azy tamin'ny fanovana ny safidy grub boot tamin'ny fampiasana kernel hafa, efa fa io Fedora io dia natomboka tamin'ny kernel 3.8 ary niteraka fifandonana aho, novaiko ho 3.6 ary nanjavona ilay olana. Te hanao toy izany koa aho amin'ny openuse fa ity distro ity dia manana kernel iray fotsiny, 3.7.
Misy soso-kevitra na fanampiana? azafady: 9
Hatramin'izao dia tsy mitranga izany raha tsy rehefa manao an'io aho na efa elaela dia ao anaty akorandoha saingy afaka manokatra rindranasa vitsivitsy aho ary tsy mahazo ahy io hadisoana io.
tsara amin'ny alàlan'ny default default dia mampiasa ny kernel-defeault ary io no mijanona tsy manome ireo olana ireo satria tsy voavaha ho an'ny rafitrao.
Ka raha manana birao na solosaina findrinao ianao dia apetraho ny desktop-kernel:
Ary ho voavaha ny olanao :).
Raha hitanao fa nitranga indray io dia apetraho koa ity fonosana ity:
Rusbel dia hoy izy:
Tena tsara ho ahy izy io satria io no fotoana voalohany nametrahako ny openuse amin'ny pc, saingy mbola mila mametraka ny drive misaotra aho.
Valiny tamin'i Rusbel
Vleo dia hoy izy:
Mametraka Suse misokatra fa tsy mampifandray ny Internet fa raha tsikaritra ny fitaovan'ny tambajotra dia tsy haiko ny manamboatra azy, misaotra anao nanazava ny fomba sy raha azo atao ny mahafantatra hoe aiza no misy ny boky fampianarana, misaotra.
Mamaly an'i Vleo
Ity ny torolàlana hampiasana ny Network Manager ao amin'ny openSUSE. Ity no torolàlana ofisialy:
Ny fahafatesan'ny Google Reader dia nambara
Kanotix2013 natolotra tamin'ny Steam efa napetraka